Chelsea oo qeyb ka soo noqotay raacdada loogu jiro xiddig ka tirsan kooxda Real Madrid – Gool FM
(London) 04 Agoosto 2020. Wargeyska “Marca” ee dalka Spain ayaa wuxuu shaaca ka qaaday in kooxda Chelsea ay xiiseeneyso inay la saxiixato xiddiga milkiyadiisa ay leedahay naadiga Real Madrid ee Sergio Reguilón inta lagu jiro suuqa kala iibsiga ee xagaaga.
23 jirkan ee Sergio Reguilón ayaa xagaagii lasoo dhaafay qaab amaah ah ugu dhaqaaqay kooxda Sevilla, isagoo kaga yimid Real Madrid.
Da’ayarkan ayaa si la yaqaano isugu muujiyay kooxda Sevilla, isaga oo ka qayb qaatay 34 kulan, wuxuuna ku guuleystay inuu dhaliyo 2 gool, halka sidoo kale uu caawiyay 4 gool kale.
Haddaba sida ay wararku sheegayaan macalinka kooxda Chelsea ee Frank Lampard ayaa doonaya inuu la soo saxiixdo xiddigo cusub, gaar ahaan booska daafaca garabka bidix, waxaana qorshaha qeyb ka ah Sergio Reguilón.
Wararku ayaa waxay intaas ku sii darayaan in Chelsea aysan kali ku aheyn raacdada loogu jiro saxiixa Sergio Reguilón, sidoo kale waxaa kula wehliya in ka badan hal koox ee ka dhisan dalka Talyaaniga, waxaana sii dheer in Sevilla ay qorsheeneyso in hal sano kale ay ku sii heysato heshiis amaah ah.
Waxaa suxid mudan in qandaraaska Sergio Reguilón ee kooxda Real Madrid uu dhacayo xagaaga 2023.